Taona roa na telo eo amin’ny fiainako
"Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra."Asan’ny Apostoly 20:24
"Ny nitiavan’i Kristy anareo dia ny nanolorany ny tenany … hamonjy antsika."Efesiana 5:2
Hoy ity mpilalao baolina kitra italiana iray, tamin’ny jona 2012: “Vonona mihitsy aho hanome taona roa na telo eo amin’ny fiainako, ho takalon’ny fahazoako milalao amin’ny fiadiana izay ho tompon-daka eto Eoropa”. Ny firehetam-po hilalao baolina, ary angamba koa ny voninahitra manokana mety ho azony avy amin’izany, no nibaiko ny fiainany manontolo.
Mifanohitra amin’ny finoana kristiana izany toe-tsaina izany. Mampitandrina antsika Jesosy hoe: “Hataonareo izay mifampitady laza ahoana no fino, nefa ny laza avy amin’Andriamanitra Tokana kosa dia tsy tadiavinareo?” (Jaona 5:44). Ny firehetam-po sy fikatsahana voninahitra, izay tena mihelina ihany anefa, no manosika ny olona hanao zavatra, saingy matetika mampanadino azy an’Andriamanitra.
Mifanohitra amin’izany kosa, fony tety an-tany Jesosy, dia niaina tam-panetrentena. Nanompo ny hafa Izy, mba hanasoa azy ireny. Tsy mba nandray laza avy tamin’olona Izy (Jaona 5:41). Ary raha nanolo-tena ho faty noho ny fitiavany antsika Izy, dia tsy nitady laza, fa kosa izay hamonjena antsika, izay hanafahana antsika amin’ny fitsarana sahaza antsika. Amin’ny maha olombelona antsika, dia tia tena sy mihambo fatratra isika… Lazain’i Jesosy fa tsy maintsy ateraka indray isika, amin’ny finoana Azy. Dia io fiainam-baovao io no hanetsika antsika, ka ho afaka hanokana ny androntsika isika hanompoana Azy, mba ho voninahiny, sady haniry koa hanome voninahitra Azy, amin’ny fanompoana ny hafa. Manova ny zavatra rehetra izany. Ary tsara ny miaina raha toa ka ho an’i Kristy, ho an’Ilay mitia antsika amin’ny fitiavana mandrakizay. Hoy ny apostoly Paoly: “Fa Kristy no anton’ny ahavelomako” (Filipiana 1:21). Tokana ny tanjony, tokana ny antony nanosika azy, tokana ny nameno ny fiainany, dia Jesosy Kristy, Ilay ohatra alainy tahaka.